UApple utyholwa ngokuTyhila iiMfihlo zeSoftware yeQualcomm kwiiKhuphiswano | Ndisuka mac
Isahluko esitsha sedabi elibekiweyo ezi zigorha zimbini zigcina iinyanga. IQualcomm inyusa amatyala ngokuchasene nenkampani esekwe eCupertino, Echaza ukuba iApple ityhile iimfihlo zesoftware abazigcinileyo phakathi kwabo kwiqela lesithathu lokhuphiswano, njenge Intel.
Ngale ndlela, yenaIzityholo ezibekwe eApple kukwaphula ikhontrakthi kunye nokhuphiswano olungafanelekangaIzenzo zolwaphulo-mthetho ezimandundu kakhulu, ukuba ziqinisekisiwe, ziya kuyifaka kwinkampani enkulu iapile.
Ityala elitsha elifakwe yinkampani echaphazelekayo lafakwa ngo-Novemba 1 eSan Diego, California. Kuyo, Kubonakalisiwe ukuba iApple ngokungafaniyo ibandakanya ikhontrakthi ngokubhekisele kwisoftware ophetheyo ukubonelela ngoqhagamshelo lweWiFi kunye neLTE kwiitshipsi ezibonelelwa ziinkampani ezikhuphisanayo, ezinjengeIntel, phakathi kwabanye.
Esi sahluko seshumi elinanye emva kokuza kunye nokuhamba phakathi kweenkampani ezimbini, okwangoku kumlo ohlukeneyo wezomthetho. Ukophulwa kwesivumelwano esisayiniweyo phakathi kweenkampani ezikwicandelo elinyeIngakhokelela kulwaphulo-mthetho lokhuphiswano olungenabulungisa, enye yeengxaki zomthetho ezinzulu anokujongana neApple.
Okwangoku, ni Intel okanye nayiphi na enye inkampani ebandakanyekayo kwezi zityholo sele ithethile, ngaphaya kolwazi oluchazwe ngu Bloomberg.
Okwangoku asibazi ubungakanani okanye ubunyani bolu lwazi, kodwa into ecacileyo yeyokuba ubudlelwane phakathi kwezi ngxilimbela zeteknoloji bude bungaphucuki. Ukumangalelwa ngokufanelekileyo kunye nezigwebo eziza kubakho ziya kuthatha ixesha Kwaye, ekuphela kwento esiqinisekileyo ngayo okwangoku kukuba sizakuqhubeka nokufunda iindaba malunga nokujongana phakathi kweenkampani ezimbini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » UApple utyholwa ngokutyhila iimfihlo zesoftware yeQualcomm kwiiKhuphiswano